Fa, izaho, dia ny ho akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy ; Ianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho.
Fa tahaka ny hahavon’ny lanitra ambonin’ny tany no haben’ny famindrampony amin’izay matahotra Azy.
... ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain'ny mandrakizay Andrian'ny fiadanana.
Ny batisan'ny Fanahy Masina
Ny finoana mihetsika araka ny tenin'Andriamanitra
Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra
Ny anjara toeran'ny Kristiana nateraka indray
Miaina amin'ny fiadanan'Andriamanitra
Ny tsy fananana asa
Azo atao ve ny mitokona ?
Fitondran-tena mampiseho Filazantsara
Vavaka, firaisana amin'Andriamanitra
Ny olona tena nandray an'i Jesosy dia maty amin'ny nofo, ny batisa dia fandevenana ampahibemaso. Fandevenana ny ota, noho izany dia olona tonga saina sy miaiky ny fahotany ary mibebaka no atao batisa. Ilaina dia ilaina ny batisa raha mbola mitohy ny hazakazaka.
Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory ; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy ; Efesiana 6:13 sy 17
Koa aoka hilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin’i Kristy, fa aoka handroso ho amin’ny tanteraka isika ka tsy hanao fanorenana indray, dia fibebahana hahafahana amin’ny asa maty sy finoana an’Andriamanitra, ary fampianarana ny amin’ ny fisasana maro sy ny fametrahan-tanana, ary ny fitsanganan’ny maty sy ny fitsarana mandrakizay. Hebreo 6:2
Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro. I Timoty 6:12
Ary hoy Jehovah tamin’i Mosesy : Nahoana no mitaraina amiko hianao ? lazao amin’ny Zanak’Isiraely mba handroso. Eksodosy 14:15
Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy, dia hoy Izy tamin’i Simona : Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonareo hahazoana hazandrano. Lioka 5:4
Ny kristiana nateraka indray
Kristiana nateraka indray
2Korintiana 13:5b “Moa tsy fantatrareo va ny amin’ ny tenanareo, fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina hianareo?”
Filipiana 3:12-14 “Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady; fa miezaka aho hihazona izay nihazonan’ i Kristy Jesosy ahy.Ry rahalahy, tsy mbola ataoko [Na: (tsy nataoko)] fa efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko; manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ ny fiantsoan’ Andriamanitra any ambony [Na: ho any ambony] ao amin’ i Kristy Jesosy.”
Ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra
Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak’ olombelona. Fitomaniana 3:33
... fa an’ i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy 1 Kor 10:26
Ny amin'ny fanambadiana
Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena ; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin’ ny famirapiratan’ ny fiposahanao.Isaia 60:1-3
Iza no handeha ho hirakay ?
Mifalia, ry zatovo, dieny mbola tanora hianao ; ary aoka ny fonao hampifalifaly anao amin’ny andro fahatanoranao ; ka mandehana any amin’ izay sitraky ny fonao sy izay jeren’ ny masonao ; nefa aoka ho fantatrao fa ho entin’Andriamanitra hotsaraina hianao amin’izany rehetra izany. Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy ; fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Mpitoriteny 11:9-10
Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany. Asan'ny Apostoly 1:8
Miala amin'ny fisainana manohitra an'Andriamanitra
Raha ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hananantsika olombelona ny fisainan'i Kristy Jesosy. Ianarana taona maro ny fialana amin'ny fisainana maha-olombelona.
Fa raha tsy amin’ ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’ Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy. Hebreo 11:6
Ny lalana hialana amin'ny fakam-panahy
Farany, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà, fa amin’ny fanapahana sy amin’ny fanjakana sy amin’ny mpanjakan’izao fahamaizinana izao, dia amin’ny fanahy ratsy eny amin’ ny rivotra [Gr. lanitra]. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo. Efesiana 6:10-13
Jery todika amin'ny fiainam-panahy
Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady ; fa miezaka aho hihazona izay nihazonan’i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko [Na: (tsy nataoko)] fa efa nahazo ny tenako ; fa zavatra iray loha no ataoko; manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony [Na: ho any ambony] ao amin’i Kristy Jesosy. Filipiana 3:12-14
"...ka nanao taminy hoe: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino hianareo? Fa ireo nanao taminy hoe: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina." Asan'ny Apostoly 19:2
... mandra-pahatongantsika rehetra ho amin’ny firaisan’ny finoana sy ny fahalalana tsara ny Zanak’Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe, mahatratra ny ohatry ny halehiben’ny fahafenoan’i Kristy ; mba tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ny saim-petsy ataon’ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana ; fa mba hanaraka ny marina amin’ny fitiavana ka hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’Izay Loha, dia Kristy ; Efesiana 4:13-15